जंकु हाम्रो अग्रजलाई भगवान सरह पुज्ने परम्परा हो : रोजेन महर्जन - Ujyaalo Nepal
जंकु हाम्रो अग्रजलाई भगवान सरह पुज्ने परम्परा हो : रोजेन महर्जन
By ujyaalo	 Last updated Feb 2, 2020 368
नेपाल चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फुलवारी हो भन्ने हामी पढ्दै आएका छौं । यहाँको भाषा ,धर्म,संस्कृति र प्रत्येक जातका पहिरनले विश्वमा नेपाललाई चिनाउदै आएका छन् । त्यही धेरै जात मध्येका एक प्रमुख जात हो नेवार समुदाय । राजधानीको रैथाने जातका रुप चिनिन्छ । नेपालका वृद्धाश्रममा बृद्ध बृद्धाहरु खचाखच भरिएको देखिन्छ । तर नेवार समुदायमा एउटा यस्तो पर्व छ, जहाँ बृद्ध बृद्धाहरुलाई पुर्नजन्मको उपमा दिएर भगवान जतिकै पुजा गरिन्छ । नेवार समुदायले सदियौंदेखि अग्रजलाई भगवानका रुपमा पुज्ने परम्पराकै रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यस्तो पर्बको नाम हो जंकु । उक्त पर्वका विविध आयामहरुका बारेमा रोजन महर्जनसँग उज्यालो नेपालका पत्रकार शिब शंकर चौधरीले गरेका कुराको सपादित अंशः
जंकु भनेको के हो ? यसबारेमा अलि बुझाईदिुनहोस् न ।
नेवारी संस्कृति अनुसार यस समुदायमा मनाउने एउटा महत्वपुर्ण पर्व हो । उक्त पर्ब मुख्यतया यो ७७ वर्ष देखि १०६ वर्षको बीचमा पुगेका पुरुष वा महिला दुवैमा मनाउने प्रचलन छ ।
जंकु किन गरिन्छ ? यहाँको विचारमा ?
नेवारी संस्कृति अनुसार चीर शुख शान्ति र स्वास्थ्य लाभको लागि जंकु अर्थात् भीमरथारोहण गरिन्छ । मानिसलाई जीवनमा एकपटक आमाले जन्माउनुहुन्छ भने दोश्रोदेखि लिएर चौथो पटकसम्म नेवारी संस्कृतिको मूल्य मान्यता अनुसार जन्माइन्छ भन्ने नेवारी संस्कृतिमा गहिरो विश्वास रहिआएको छ । परिवारले जंकु मनाउदा वृद्धृद्धालाई दोश्रो जन्मको रुपमा तामाको भाडाबाट पुनर्जन्म भएको विश्वास सहित मौलिक परम्परा अनुसार पूजापाठ गरी सम्मान गर्नेे मान्यता छ । विगतमा माटाका भाँडाबाट गरिने यस्तो संस्कार अहिले तामाको भाडाबाट गर्दा अरुलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । करिब सय वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मेरो हजुरआमा अहिलेसम्म निरोगी रही तन्दुरुस्त र खुशी हुनुहुन्छ । जंगु पुजाको कारण यस्तो सम्भव भएको हो हामी विश्वास गछौं ।
यस पर्वका महत्वपूर्ण रीतिरिवाज र बिधिहरु के के हुन् ?
पहिलो र दोश्रोमा भीमरथारोहण्मा नातीहरु वा छोराहरु कमसेकम चार जनाले आफ्नो कपाल खौरेर विवाह झैँ सजाएर डोलीमा राखी ’जंकु’ गरिएका व्यक्तिलाई टोल सहरको परिक्रमा गराई एउटा उत्सवको रुपमा यस पर्वलाई मनाउने गरिन्छ । तेश्रोमा झ्यालबाहिरबाट भीमरथारोहण हुने व्यक्तिलाई तानेर घरभित्र ल्याइन्छ । चौंथोमा माटोको (कओ) भाडा भित्र राखेर पूजा गरेपछि बाहिर ल्याइन्छ । यसरी नै रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको क्रममा सुनधारामा पुग्दा यो समुदायले मच्छिन्द्रनाथलाई माटाका भाँडाहरु चढाउनु पर्ने परम्परा रहिआएको छ । कान छेडेर मुन्द्रा लगाउने चलन पनि छ । जीवनकालमा जति पटक जंकु गरियो, त्यति नै कानमा मुन्द्रा थपिन्छ । यसबाट पनि उमेर कति भन्ने जान्न सजिलो हुन्छ ।.
नेवारी संस्कृति अनुसार मानिसको जंकु कति कति बर्षमा गरिन्छ ?
नेवारी संस्कृति अनुसार ७७ वर्ष ७ महिना सात दिन, सात, पला सात घडिमा पहिलो जंकु हुन्छ, जसलाई नेपालीमा भीमरथारोहण पनि भनिन्छ । त्यसैगरी, दोश्रो भीमरथारोहण ८२ वर्षमा हुन्छ भने तेश्रो ८९ वर्षमा हुने चलन छ ।
विशेषगरी रथारोहण गर्दा को को ले बोकेको वा तानेको हुन्छ ?
रथारोहण गर्दा बिशेषगरी आफ्नो परिवारका छोरा र नातिहरु प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा रहिआएको छ । आफ्ना परिवारका छोरा नाति कम भएमा अरु नजिकका आफन्तहरुले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ ।
जंकुमा आफन्तहरुलाई निमन्त्रण गर्दा बिषेश गरी कस्तो खालको आफन्तहरुलाई आमन्त्रण गनुहुन्छ ?
हजुर आमा भए उहाँको माइतीघरको आफन्त,गुठियारहरु,छिमेकी र इष्टमित्रलाई आमन्त्रण गनुपर्छ ।
यो पर्वमा आफन्तहरुले के दिएर सहयोग गर्छन् ?
माया ममताका साथ बिशेषगरी लुगाहरु र नेवारी खानेकुराहरु दिएर सहयोग गरेको हुन्छन् । श्रम गरेर एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । परेको अवस्थामा पैचो दिएर सहयोग गरिन्छ ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७६, बिहीबार १२:५५
देश, दल, राजनीति, सत्ता, समाजबारे अग्रज पत्रकार देवेन्द्र कोइरालाका १० टिप्पणी…
बिएण्डसी सुरक्षित र सक्षम छ : मेडिकल टिम,सुरक्षित उपचार सेवा प्रवाह भइरहेको छः सूचना…
कोरोनालाई भयाभह बनाइयो, बीएण्डसी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर संचालनमा छ, कुनै समस्या…